-Elgar no-Bavuma bayayivimba i-England
u-Dean Elgar ebeshayiwe futhi elimele kodwa yena no-Temba Bavuma bahole ama-Standard Bank Proteas ukudlula ekunzimeni ngasekupheleni kosuku lwesine lomdlalo we-Test yesithathu e-The Oval e-London ngeSonto.
i-England ibingaphambili njengoba inciphise ama-Proteas ku-117/4 njengoba bebheke ukunqoba ngo-492 kuma-overs okuqala angu-148. Ukunqoba kuzobeka i-England ngaphambili ngo-2-1 kwi-series futhi kuzosho ukuthi bazoyigcina i-Basil d’Oliveira Trophy.
Ngesinye isikhathi bekubukeka sengathi i-England inganqoba umdlalo ngosuku lwesine emuva kokuthi u-Ben Stokes anezezele kwikhulu lakhe le-innings yokuqala ngokukhipha u-Quinton de Kock no-Faf du Plessis emabholeni alandelanayo u-Bavuma efika kwi-crease nge-hat trick.
Kodwa u-Bavuma, njengoba bekumele enza njengakudala, ukuvezile ukuthi uyindoda elungile ezomisa kahle i-innings kanye no-Elgar. Ngasekupheleni kosuku bebehlanganise i-partnership yama-runs angu-65 engaphumile nge-wicket yesihlanu no-Elgar ku-72 (111 balls, 11 fours) no-Bavuma ku-16 (59 balls, 1 four).
u-Elgar ushayeke kakhulu esandleni kaningi kanye nezindaweni ezahlukene emzimbeni futhi, uma eqhubeka eyohlanganisa ikhulu lakhe lesishagalombili, uyobe ekuzuzile ngosuku olunzima. Lo u-50 wakhe wesithathu kwi-series futhi ngathi uyena umdlali ongagugquki eqenjini. Ngathi ebesenkingeni futhi udlale isikhathi esiningi ngesandla esisodwa.
Yena no-Bavuma amadoda ahamba phambili nge-form ngenkinga ama-Proteas azithola ekuyona futhi kufaka umbuzo wokuthi, u-Bavuma kumele anyuselwe phezulu noma cha kumdlalo wokugcina ozoqala e-Old Trafford ngoLwesihlanu.
Ama-Proteas aphose kahle ngosuku lwesine njengoba u-Keshav Maharaj ekhiphe phakathi nendawo nama-wicket amathathu (3/50 in 13.5 overs) kodwa inkinga ibisikhona njengoba i-England ibingaphambili ngama-runs angu-178 kwi-innings yokuqala futhi ukuma kwayo kube u-Tom Westley (59 off 141 balls, 11 fours), u-Joe Root (50 off 94 balls, 6 fours) no-Jonny Bairstow (63 off 58 balls, 6 fours, 1 six).
Uphose kahle u-Stokes njengoba bekumele baphose (2/29 kwi-spell sama-overs ayisishagalombili) kodwa bonke abaphosela i-England bekunzima ukubhekana nabo futhi okubalulekile ukuthi baphumelele kakhulu kunama-Proteas ekufakeni ibhola lapho okumele balifake khona.
u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England u-Conrad uyajabula ngalapho i-SA ‘A’ ibheke khona Singawenza umthelela - u-Rabada u-Cook ugcina ama-seamer ama-Proteas kude ngosuku oluthathanayo -Du Plessis uyakhuza ngokukhululeka u-Amla uthemba ukuthi kungaba nomunye umlingo eqenjini alikhonzile u-Zondo ulungele i-A Triangular Series enenselelo u-Rabada obuyayo ‘ulindele ukudlala’ Ukuhlulwa i-West Indies kwi-U19 series kumlimazile u-Mahatlane